Xoogga dalka oo u gurmanaya Dad rayid ah oo la dagaalamaya argagaxisada. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Xoogga dalka oo u gurmanaya Dad rayid ah oo la dagaalamaya argagaxisada.
Xoogga dalka oo u gurmanaya Dad rayid ah oo la dagaalamaya argagaxisada.
Ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qeybta 21-aad ayaa ku baxay deegaanka Shabeellow oo qiyaastii 20-km u jira deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug, kaddib markii maleeshiyada Al-shabaab ay dagaal ku soo qaaday dadka deegaanka oo ka biyo diiday amarro ay dul dhigeen.
Dagaalka ay maleeshiyada argagaxisadu kusoo qaaday dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaanka Shabeellow aroortii hore ee saaka ayay wararku sheegayaan in uu ka dambeeyay kaddib markii maleeshiyadu ay isku dayday in ay baad ka qaataan dadka deegaanka,taas oo ay ka biyo diideen dadka rayidka ah ee halkaas ku nool.
Wararka ayaa intaas ku daraya in uu jiro khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray maleeshiyada Al-shabaab iyo dadka deegaanka oo naftooda u huray in ay iska xureeyaan cadowga kusoo duulay deegaannadooda,waxaana hadda deegaanka kaabiga ku haya ciidanka xoogga dalka si ay u baacsadaan argagaxisada oo aan awoodin in ay u babac dhigaan ciidanka Qaranka.
Muddooyinkii dambe shacabka Soomaaliyeed ee nool deegaannada ay ku suganyihiin maleeshiyada Al-shabaab ayaa ku baraarugay dhagarta argagaxisada, waxeyna billaabeen in ay la dagaalamaan si ay iskaga dulqaadaan dhibaatada ay ku hayaan,iyadoo cadowga jab xooggan la gaarsiiyay.
Previous articleKulanka Golaha Shacabka oo goor dhaw furmaya.
Next articleIlhaan Cumar oo guul ka gaartay wajiga 1-aad ee doorashada.